BrightTag: Madal Maareynta Tag Tag | Martech Zone
Laba arrimood oo xirfadleyda suuqgeynta suuqgeynta ay si joogto ah ula dagaallamaan khadka tooska ah ayaa ah awoodda lagu yareyn karo waqtiyada xamuul ee degmadooda iyo awoodda ay u leeyihiin inay si dhakhso leh ugu daadiyaan xulashooyin dheeri ah oo dheeri ah guryaha ay leeyihiin. Shirkadaha caadiga ah ee ganacsiga ayaa laga yaabaa inay yeeshaan jadwal dejin oo qaadata toddobaadyo ama xitaa bilo si ay isbeddel ugu hesho goobta.
Mid ka mid ah macaamiishayada shirkadda ayaa isku dhafan BrightTagMaareynta sumadda shirkadaha ee bogooda oo leh natiijooyin aan caadi ahayn. Boggooda waxaa ku socday dhowr Analytics qoraallo lagu daro agab kale oo qaarkood. Adigoo ku dhejinaya dhammaan astaamaha BrightTag, waqtigooda culeyska si weyn ayaa loo dhimay - waxayna maamuli karaan aaladaha isku dhafan iyo sida tooska ah ee BrightTag iyaga oo aan ku dhicin kooxda websaydhkooda.
Waa kan muuqaal kooban oo laga soo qaaday Abaalmarinta CEC Merrick Momentum 2013.
Maareynta Tag BrightTag ayaa kaa xoreynaysa xaddidaadda tags si aad waqti yar ugu lumiso isku diridda lambarka iyo waqti dheeraad ah oo cusub. Hal tag ayaa wada sameeya.
Tilmaamaha Maareynta Tag Tag
U qaabee oo cusbooneysii taaga ilbiriqsiyo gudahood. Ka xoroobo wareegga horumarinta IT-ga iyo maaraynta tags waqtigaaga. Hawsha shaqo ee BrightTag waxay kuu oggolaanaysaa inaad si fudud u maamusho taaga markasta iyo si kasta oo aad diyaar u tahayba. Isla markaaba sameyso sumad aad horay u arki karto, dhaqaajinkarto oo aad shaqeyn karto, markasta oo aad u baahato.
Xawaareyso bartaada iyada oo aan lumin xog qiimo leh. Hal-labo feer oo loogu talagalay waxqabadka. BrightTag Server-Direct wuxuu xogta u gudbiyaa la-hawlgalayaashaada waqtiga-dhabta ah, isagoo yareynaya tirada sumadaha boggaaga isla markaana joojinaya luminta xogta jidadkeeda. BrightTag sidoo kale waxay si xikmad leh u shubtaa sumadda sumadda iyada oo aan la xaddidaynin waxyaabaha ku jira bogga si isticmaaleyaashaadu aysan ugu xayirin sugitaanka astaamaha gaabiska ah.
Qabso ficil kasta oo adeegsade iyo walxo xog ah boggaaga oo la wadaag mid ka mid ah lamaanayaashaaga. Hantidhowrka meesha xogta lagu uruurinayo iyo cidda xogta kuheleysa hal guji.
Xeerarka ganacsiga awood kuu siinaya inaad go'aamiso goorta iyo sida loo calaamadeeyo dabka, xakamaynta u-ololeynta, isbarbar-dhigga kuwa wax iibiya madax-ilaa-madaxa, si fiican u hagaaji dadaalka suuqgeyntaada, iyo inbadan. Ka soo qaado xeerar cayiman oo horay loo qaabeeyey ama aad ku abuuri kartid xeerarkaaga shuruudaha shuruudaysan.
Real-tag la socodka iyo warbixinta. Ku hel aragti deg deg ah tag kasta oo ku yaal bog kasta oo ka mid ah boggaaga. Aragtida muraayada fudud ayaa ku siineysa maqaarka caafimaadkaaga sumadahaaga, halka kormeerkeenna API wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah ugu xirto stats qalabkaaga.
Jawaab qalad ah oo deg deg ah, xog lumis yar. Aqoonso oo si dhakhso leh u hagaaji arrimaha tayada xogta iyadoo la adeegsanayo ka warbixinta qaladka waqtiga-dhabta ah. Xaqiiqdu waxay tahay in sumadda sumadda ee ka dhexeysa biraawsarka ay 10x u badan tahay inay ka dhalato khaladaad. Warbixinta qaladka-waqtiga dhabta ah waxay kaa caawineysaa inaad si deg deg ah u aqoonsato khilaafaadka, ficil qaado oo ka hortag luminta xogta.
Kaatalogga lammaanaha. Iyada oo la adeegsanayo iskudhafka qaabeynta iyo tagista boqolaal calaamadaha lammaanaha, waad kacaysaa oo daqiiqado ayaad socotaa. Aaladaha raadinta dareenka ayaa kaa caawinaya inaad si fudud ugu hesho lammaanayaashaada iibiyaha magaca ama lambarka, halka Smart Custom Tag kuu siinayo dabacsanaan markaad u baahato.
Deji siyaasadaha asturnaanta taas oo u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay ka baxaan. Iyadoo la raacayo qawaaniinta asturnaanta caalamiga ah ee had iyo jeer isbedelaya, waxaad u baahan tahay qalab dabacsan oo aan kaaga baahnayn inaad kala saarto websaydhkaaga markasta oo sharcigu beddelo. Xushmee xulashooyinka macaamiishaada ee ku saabsan ururinta xogta oo ku hel calaamadaha safka.
Khabiir. Marka tagsku khiyaaneeyo, BrightTag wuxuu leeyahay koox khubaro calaamadeysata ah oo wax walba soo arkay oo ku siinaya ilaha aad u baahan tahay.
Tags: additisdhalaalxuduntaAnalytics googlekenshoom6domnitureTiradadariiqa goobtatagistatagstellapartmarkeedawebtrends